Semalt एक धेरै राम्रो SEO रणनीति को लागी आधारभूत तत्वहरु साझा गर्दछ
सफल खोज इञ्जिन अप्टिमाइजेसन खोज शब्दहरूको दुनिया बुझ्ने, यसलाई संरचना गर्ने, र प्रयोगकर्ताका लागि उत्तम नतिजा सिर्जना गर्नेमा आधारित छ। यसको लागि उच्च-गुणवत्ताको सामग्री आवश्यक छ। तर प्रयोगकर्ताको अनुभव र प्राविधिक पक्षहरूलाई पनि ध्यानमा राख्नु पर्छ।
त्यसोभए हामी कसरी राम्रो परिणामहरू सिर्जना गर्छौं जुन खोज परिणामहरूको शीर्षमा योग्य छ?
वास्तवमा, त्यहाँ धेरै विधिहरू छन्। यद्यपि हामी यस लेखका सामग्रीहरूको माध्यमबाट तपाईसँग सबै भन्दा महत्वपूर्ण साझा गर्नेछौं।
तर सबैभन्दा पहिले, हामी तपाईंलाई यहाँ क्लिक गर्न आमन्त्रित गर्दछौं नि: शुल्क तपाईंको साइटको हालको राज्य पत्ता लगाउनको लागि।
ईन्जिन अनुकूलनका केहि फाइदाहरू
SEO धेरै कम्पनीहरूको अनलाइन मार्केटिंग मिक्सको अभिन्न हिस्सा हो। किनकि खोज इन्जिन अप्टिमाइजेसनको धेरै फाइदाहरू छन्:
वेबसाइटमा अधिक आगन्तुकहरू।
जानकारी आवश्यकताको साथ आगन्तुकहरू।
विशिष्ट आवश्यकताको साथ आगन्तुकहरू।
नेतृत्व र बिक्री को लागी च्यानल।
आगन्तुकहरूको लागि कुनै प्रत्यक्ष खरीद लागत छैन।
थप अनलाइन मार्केटिंग च्यानल सुदृढीकरणको लागि आधार।
परीक्षण र अनुकूलनको लागि आधार।
सफल खोज ईन्जिन अनुकूलनको लागि आधारको रूपमा कुञ्जी शव्द प्रयोग गर्दै
यहाँ हामी खोजशब्द खोजको तीन चरणहरू छुट्याउँछौं:
धेरै खोज सर्तहरू
धेरै कम्पनीहरूको स्क्रीनमा केवल केही मुख्य सर्तहरू हुन्छन्। तर प्रयोगकर्ताहरू हजारौं बिभिन्न सर्तहरूको रूपमा खोजी गर्दछन्। यहाँ एक लामो पूंछ कुञ्जी शब्दको बोल्छ। यसले समानार्थी शब्द, सम्भावित प्रयोगहरू, र अधिक पनि समावेश गर्दछ। साथै ग्राहक यात्राको साथ। प्रत्येक खोज वाक्यांश र संयोजनको बिभिन्न खोजी भोल्युम हुन्छ - अर्थात् मानिसहरूलाई प्रतिमहिना खोजी गर्ने संख्या।
हामी यी कुञ्जी शब्दहरू केन्द्रिय रूपमा अनुसन्धान गर्छौं र तिनीहरूलाई मूल्याate्कन गर्दछौं। किनकि यसले खोज इन्जिन अप्टिमाइजेसनको लागि अर्को चरणहरूमा परिणाम दिन्छ: वेबसाइट वास्तुकला र सामग्रीमा काम गर्दै। खोजशब्द अनुसन्धानका लागि हामी धेरै SEO उपकरणहरू प्रयोग गर्दछौं। उद्योग र देशमा निर्भर गर्दै, त्यहाँ उपयुक्त डाटाबेसका साथ उपयुक्त डाटाबेस छन्। केही उपकरणले केवल दुई सर्तहरू निकाल्दछ, अन्य दर्जनौं वा सयौं सर्तहरू।
एकचोटि खोज सर्तहरू र खोजी भोल्युम अनुसन्धान गरिसकेपछि, विश्लेषण सुरु हुन्छ। कुन सर्तहरूको कम्पनीको लागि सबैभन्दा ठूलो मान छ? यहाँ यो प्राय: कम्पनीको स्थिति र यसको उत्पादनहरूमा निर्भर गर्दछ। हामी सँगै यसलाई छलफल गर्नेछौं। हामी मूल्याate्कन पनि गर्छौं कि कुन सर्तहरूसँग शीर्ष गुगल र्याs्कि ofको उत्तम मौका छ - र त्यसमा केन्द्रित हुन्छौं।
तपाइँलाई तपाइँको वेबसाइट प्रमोट गर्न मद्दतको लागि, हामी तपाइँलाई एसईओ र पदोन्नतिको लागि उत्तम उपकरणहरू पत्ता लगाउन आमन्त्रित गर्दछौं।
तपाईंको वेबसाइटको वास्तुकला यसको सन्दर्भको लागि उपयोगी छ
तपाईको वेबसाइटको वास्तुकलाको ख्याल राख्नु धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यो कुशलतापूर्वक गर्नका लागि, हामी तपाईंलाई निम्न बुँदाहरू ध्यानमा राख्न आमन्त्रित गर्दछौं:
क्लस्टर खोज सर्तहरू
वेबसाइट वास्तुकला तपाईको घर सफा गर्नु जत्तिकै हो। तपाईलाई सबै चीजको लागि राम्रो ठाउँ चाहिन्छ। अर्डर लडाई आधा हो जब यो सफल खोज इंजन अनुकूलन को लागी आउँछ। तपाइँ शीर्षकहरूमा शीर्षकहरू क्लस्टर गर्नुहोस् र तिनीहरूलाई असाइन गर्नुहोस्।
उदाहरण: तपाईसँग topic० सर्तहरूको साथ शीर्षक छ। यी terms० सर्तहरूको लागि उपयुक्त सामग्री पछि उप-पृष्ठमा सिर्जना गरिनेछ। यस तरिकाले, प्रयोगकर्ताले खोजिरहेको बिल्कुल सामग्री पछि पृष्ठमा छ।
कीवर्ड क्यानिबालिजम रोक्नुहोस्
यदि एक वेबसाइट लामो समय को लागी गरीएको छ, त्यहाँ प्राय "कुञ्जीशब्द क्यानिबलिज्म" को समस्या हुन्छ। महत्वपूर्ण कुञ्जी शव्दहरू थुप्रै उपपृष्ठहरूमा फेला पार्न सकिन्छ। खोजी ईन्जिनले स्पष्ट रूपमा निर्दिष्ट गर्न सक्दैन कि कुन पृष्ठ अब अगाडि हुनुपर्छ।
परिणाम: तपाई दुवै पक्षको साथ अगाडि हुनुहुन्न। धेरै धेरै भएको छ - र थोरै हासिल भएको छ। खोज इञ्जिन अप्टिमाइजेसनमा यो प्राय: यस्तो हुन्छ कि तपाइँले केहि पृष्ठहरू मर्ज गर्नु पर्छ। यहाँ पनि, त्यहाँ केहि प्रविधि र उपायहरू छन्।
आन्तरिक लि .्क अनुकूलन गर्नुहोस्
लि्कहरू वेबसाइट अगाडि छ कि छैन भन्नेमा महत्त्वपूर्ण रै ranking्कि factor कारक हुन्। खोज इन्जिन अप्टिमाइजेसनमा दुई परिप्रेक्ष्यहरू छन्: बाह्य ब्याकलिंक्स, त्यो हो, अन्य वेबसाइटहरूका लिंकहरू। टर्म अफपेज पनि यहाँ प्रयोग भएको छ।
क्षेत्रले विरलै खातामा लिइएको हो आंतरिक लिंक। यसले व्यक्तिगत उप-पृष्ठहरू साइट आर्किटेक्चरसँग कसरी सम्बन्धित छ र यी व्यक्तिगत उप-पृष्ठहरू एक अर्कासँग कत्तिको नजिकको सम्बन्ध छ भनेर दर्साउँदछ। हाम्रो अनुभव मा, यो सफल एसईओ को लागी एक मुख्य कारक हो।
SEO मा लिंकहरूको उपयोगिताको बारेमा बुझ्नको लागि हामी तपाईंलाई हाम्रो ब्लग भ्रमण गर्न आमन्त्रित गर्दछौं।
खोजी ईन्जिनहरू र आगन्तुकहरूमा सामग्रीको महत्त्व
कीवर्डहरू महत्त्वपूर्ण छन्। किनभने यदि तपाइँ सर्तहरू नाम दिनुहुन्न भने, तपाईं अगाडि उभिन सक्नुहुन्न। र अझै कसैले एक मात्र खोज ईन्जिनको लागि लेख्न गल्ती गर्नु हुँदैन। यसको विपरित: त्यहाँ प्रत्येक क्लिक पछाडि एक व्यक्ति छ - र तिनीहरू राम्रो सामग्री पढ्न चाहन्छन्। उही समयमा, खोजी ईन्जिनले उत्तम, सबैभन्दा सहयोगी सामग्री पहिले आउन चाहन्छ। दुबै संयोजन - त्यो सफल खोज इञ्जिन अनुकूलनको कला हो। हामी यहाँ उच्च प्रदर्शन सामग्रीको बारेमा कुरा गरिरहेका छौं।
यहाँ राम्रो सामग्री लेख्नको लागि राम्रो रणनीति राख्नको लागि खातामा लिनु पर्ने चरणहरू छन्:
अब यो सामग्रीको सही फाराम खोज्ने कुरा हो। यसमा तीन तह हुन्छन्: पहिलो, तपाई शैलीमा पाठ लिनुहुन्छ (पाठ, छवि, भिडियो, अडियो)। त्यसोभए शैली (मनोरञ्जन, सूचना, ज्ञान, मानहरू) को लागि र त्यसपछि सामग्री ढाँचाको लागि - उदाहरणका लागि ट्यूटोरियल, चेकलिस्टहरू, अन्तर्वार्ताहरू, र अन्य धेरै विकल्पहरू। एकसाथ, यसले सामग्री डिजाइन सिर्जना गर्दछ, अर्थात् कसरी एकल सबपेज संरचित र संरचित हुन्छ।
कुञ्जी शब्दहरूको सेटले पनि कुन शीर्षकहरू महत्त्वपूर्ण छन् र तिनीहरूलाई कसरी पहुँच गर्ने भनेर देखाउँदछ। यो सामग्री योजना द्वारा पछ्याउँदछ, जुन प्राय एक चौथाई वा एक पूर्ण वर्षमा फैलन्छ। त्यसोभए तपाइँ जान्नुहुन्छ कि कहिले र कुन सामग्री विकसित हुँदैछ। एकै समयमा, तपाईं सँधै लचिलो हुनुपर्छ र छोटो सूचनामा महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूको साथ सम्झौता गर्नुपर्छ। वास्तवमा, पहिलो रैंकिंग परिणामहरू केहि महिना पछि मात्र देखिन्छन्।
अब व्यवसायमा तल झर्ने समय हो। यहाँ ध्यान सम्पादकहरूमा छ, जससँग थ्रेडहरू सँगै आउँदछन्। तपाईंले निश्चित गर्नुपर्दछ कि तपाईंसँग सम्पादकीय सीप छ, कपीराइटर पनि छ, र एसईओ आवश्यकताहरू बुझ्नुहुन्छ - स्निपेटबाट नेतृत्व गर्न।
साथै, तपाईंसँग मार्केटिंग, बिक्री र विशेषज्ञ विभागहरू हुनुपर्दछ। अन्तमा, निश्चित गर्नुहोस् कि अन्तिम सामग्री CMS मा एकीकृत छ - IT र डिजाइनको लागि जिम्मेवारसँग समन्वयमा।
आगन्तुकलाई ग्राहकहरुमा रूपान्तरण गर्नका लागि कारकहरू
साधारण आगन्तुकहरूलाई ग्राहकमा रूपान्तरण गर्न सफल हुनको लागि, धेरै युक्तिहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ। अन्य सुझावहरूको बीचमा, हामी उल्लेख गर्न सक्छौं:
टेक्नोलोजी बनाम सामग्री
तपाईले १,००० आगन्तुकहरु मध्ये कति वटा अर्डर गर्नुहुन्छ? रूपान्तरण दर महत्वपूर्ण छ। अनुकूलन गर्दा, जे होस्, प्राय: मात्र एक टेक्निकल स्तरमा काम गर्दछ।
हाम्रो दृष्टिकोणबाट, तपाइँ सामग्री ठीकसँग परीक्षण गर्नुपर्दछ। उदाहरणका लागि हेडलाइटहरू, प्रविष्टि पोइन्टहरू, वा लाभहरूको तर्कबाट तर्कहरू। यहाँ उल्लेखनीय रूपमा अधिक संभावना छ।
अर्को पक्ष जुन वेब विश्लेषण र लक्ष्य मापनमा विरलै मानिन्छ: सामग्री प्रदर्शन। प्राय: मापन केवल फनेल वा यात्राको अन्त्यमा लिइन्छ। त्यसोभए जब प्रयोगकर्ताले फारम भर्दछ वा अर्डर पठाउँदछ। अर्कोतर्फ, ध्यान सामग्रीको प्रदर्शनमा कडाईका साथ रहेको छ, अर्थात् कसरी कसरी प्रयोगकर्ताहरूले सामग्रीसँग अन्तर्क्रिया गर्दछन्। यो क्लिक दरहरू, बाउन्स दरहरू, बसाईको लम्बाइ, र अन्य सफलता मानहरू बारे हो जुन सही मापन गर्न सकिन्छ।
यी दुई कारकहरू बाहेक, त्यहाँ सीसाहरूको योग्यता छ, जुन हामी पछि अर्को सामग्रीमा विकास गर्नेछौं।
कसरी सजिलै सफल हुने?
माथिको सबै सूचीबद्ध चरणहरूमा सजिलैसँग जानको लागि तपाईलाई पेशेवर सेवाको सहयोग चाहिन्छ जस्तै Semalt जसले तपाईंलाई ठाउँमा राम्रो रणनीति राख्न मद्दत गर्दछ।
यहाँ कारणहरू छन् जुन तपाईंलाई हाम्रा सेवाहरू चाहिन्छ।
कुञ्जीशब्द अनुसन्धान एउटा अनुमानित आधारभूत विषय हो। यद्यपि, अनुभवी SEOs लाई पनि किवर्डको राम्रो सूचीको सूची निर्माण गर्न गाह्रो लाग्छ। त्यसो भए, तपाईंको कोसिसको लागि प्रासंगिक कुञ्जी अनुसन्धान मद्दत गर्दै हामी तपाईंको लागि यसलाई सजिलो बनाउँदछौं। साथै, उत्तम एसईओ उपकरणको साथ हाम्रो अनुभवहरूबाट लाभ लिनुहोस्।
SEO रणनीति SEO र कीवर्डहरूको अवधारणाबाट उत्पन्न भएको हो। उदाहरण को लागी, खोज सर्तहरु केहि उप-पृष्ठहरु संग फेला पार्न योग्य परिभाषित गरीएको छ। तसर्थ, हाम्रो लक्ष्य भनेको तपाईंलाई सामग्रीको जस्ता केही आवश्यक उपायहरू राख्न मद्दत गर्ने छ।
उच्च-गुणवत्ता सामग्री अनलाइन मार्केटिंगको जीवनरक्त हो। त्यसोभए, एक पेशेवर सेवाको रूपमा हामी तपाईंलाई उच्च-स्थानमा सामग्री वितरण गर्नेछौं जसले आगन्तुकहरूलाई बाध्य गर्दछ।
हामी धेरै वेबसाईटहरूमा देखेका अवरोधहरूको बारेमा जान्नको लागि तपाइँ हाम्रो वेबसाइटको भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ - र हामी पाठ र SEO कसरी समन्वय गर्छौं।
SEOs प्राय: मात्र ठूलो चित्र देख्दछन्। र रूपान्तरण अनुकूलक विवरण मा हराउन। हामी फरक दृष्टिकोणको वकालत गर्छौं: ध्यान केन्द्रक आगन्तुक र यूआरएलमा छ। यस मार्गमा असंख्य रूपान्तरणहरू छन्।
सफल खोज इञ्जिन अप्टिमाइजेसन एक प्रक्रिया हो, परियोजना होइन
तपाईको अप्टिमाइजेसन रणनीतिमा प्रभावकारी रूपमा सफल हुन तपाईले धेरै चरणहरू पार गर्नुपर्नेछ र सबै भन्दा माथि राम्रोसँग स्थापित प्रक्रिया अनुसरण गर्नुहोस्।
चलिरहेको वेब विश्लेषण
कुनै वेबसाइट शून्यबाट नम्बर एकमा जान सक्दैन। यो खोजी ईन्जिन अप्टिमाइजेसनले कसरी काम गर्दैन - कम्तिमा यदि तपाईं सफासँग अघि बढ्नुभयो भने। तपाइँले तपाइँको स्तर निर्धारण कार्य गर्नु पर्छ। कुञ्जीशब्दहरू, पृष्ठ आर्किटेक्चर, र सामग्री यसको लागि आधार हो। अब श्रेणीकरण अवलोकन र विश्लेषण गर्न को लागी छ। हामी कहाँ छन् - र हामी के गर्न सक्दछौं? श्रेणीकरण उपकरणहरू खोजीमा स्थिति मोनिटर गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। टप अपका लागि सम्भावित विकल्पहरू लिंक निर्माण, तर प्राविधिक अप्टिमाइजेसनहरू हुन्।
समय बजेट खाली गर्नुहोस्
खोज इञ्जिन अप्टिमाइजेसन शायद नै जरुरी छ, तर जहिले पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नतिजाको रूपमा, यो प्राय: दैनिक काममा पछाडि झर्छ। यस नियमित कामको लागि आधार एक एसईओ रणनीति हो जुन सुरूमा एक पटक बाहिर काम गरिन्छ।
कार्मिक र सेवा प्रदायकहरू
SEO मा काम गर्ने दुई तरिकाहरू छन्: तपाईंको आफ्नै स्टाफ मार्फत वा सेवा प्रदायकहरू मार्फत। प्रोजेक्ट प्रबन्ध गर्ने मार्केटिंग प्रबन्धकहरू उनीहरूको आफ्नै विशेषज्ञ स्टाफ हुन्। उही समान प्रबन्ध निर्देशकहरूमा लागू हुन्छ। हामी विरलै अनुभव गर्दछौं कि पर्याप्त स्रोतहरू घर-घरमा उपलब्ध छन्। या त त्यहाँ प्राविधिक ज्ञानको अभाव छ, उदाहरणका लागि उपकरण र वेब विश्लेषणको साथ। वा सामग्री निर्माणमा बाधा छ। आधारभूत रणनीति पनि प्रायः स्पष्ट हुँदैन।
सफल खोज इञ्जिन अप्टिमाइजेसन न तो रकेट विज्ञान हो न "जादु"। वास्तवमा, उपकरणहरूसँग काम गरेर, सामग्री र वेबसाइटमा काम गरेर - यी सबै सिक्न र कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। यो किन, एक को रूप मा SEO एजेंसी, हामी ग्राहकको परियोजनाहरूमा साथै हाम्रो ब्लगमा हाम्रो ज्ञान साझा गर्दछौं। आज पनि धेरै कम्पनीहरूले सर्च इन्जिनका लागि उनीहरूको साइटलाई अप्टिमाइज गर्दैन - र यसैले प्रतिस्पर्धात्मक लाभ छोड्छन्। वास्तवमा, एसईओ ट्राफिक एक अत्यन्त प्रभावकारी मार्केटिंग च्यानल हो र रहनेछ।
यदि तपाईं त्यस्ता कम्पनीहरूको सदस्य हुनुहुन्छ भने हामी सुझाव दिन्छौं कि तपाईं उत्कृष्ट अनलाइन सेवाहरू प्रयोग गरेर प्रतियोगिताबाट अलग रहनुहोस्।
यदि तपाईं आफ्नो वेबसाइटको हालको अवस्था जान्न चाहानुहुन्छ भने, क्लिक गरेर तपाईं यसलाई नि: शुल्क गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ।
थप रूपमा, हामीसँग उत्कृष्ट SEO र प्रमोशन उपकरणहरू छन् AutoSEO र पूर्ण एसईओ, कि हामी तपाईंलाई खोज्न आमन्त्रित गर्दछौं।